UN ကိုလည်း မောင်းထုတ်လိုက်ပါ | ဌေးလွင်ဦး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
UN ကိုလည်း မောင်းထုတ်လိုက်ပါ | ဌေးလွင်ဦး
မြန်မာပြည်က မျက်ကန်း အမျိုးသားရေး ၀ါဒီတွေ၊ ပညာမဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အာဏာမက် နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ မေတ္တာတရားကို သံကုန်ဟစ်နေတဲ့ လူသတ်ဂိုဏ်းဘုန်းကြီးတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော် ထူထောင် ဘို့ စိတ်ကူး ယဉ်နေသူတွေ–၊ မွတ်ဆလင်များကို ဆက်လက်မုန်းတီးလိုက်ပါ၊ ခရစ်ယာန်များကို ဆက်လက်မုန်းတီးလိုက်ပါ၊ တိုင်းရင်းသားများကို ဆက်လက် ဖိနှိပ်လိုက်ပါ။- ကျုပ်တို့ မတရား အနိုင် ကျင့်ခံ လူတွေဘက်က ဒီထက်ခံရစရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး-၊ ဂိတ်ဆုံးနေခဲ့ပြီ။ ဒီတစ်ခါ ခင်ဗျားတို့ အလှည့်ကို ပြန်ရောက်လာပါမယ်။
ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာများသာ မြန်မာမြေ၊ မြန်မာရေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရှင်သခင်များ ဖြစ်တယ်လို့ အယူသည်း ဘ၀င် မြင့်နေသှုများအားလုံး- အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်ရပါတော့မယ်။ ခေတ်ကာလနဲ့ ကမ္ဘာ့ဗဟုသုတ ဘာဆို ဘာမှ မရှိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီး ဘ၀င်လှိုင်းစီးနေခဲ့သမျှ- ဗြောင်လိမ်နေခဲ့သမျှ၊ ခင်ဗျားတို့ဘ၀များ ထုံးဘူး အ၀ကျဉ်း သလို ကျဉ်းလာစေရပါမယ်။– ခင်ဗျားတို့က လိမ်နေတယ်- ပတ်နေတယ်၊ ကျုပ်တို့က ဖေါ်နေတယ်၊ ဖြောင့်နေ တယ်-၊ ကမ္ဘာအလယ်မှာ ဘယ်သူတွေ အရှက်ကွဲ သိမ်ငယ်ရမယ် ဆိုတာ၊ ကိုယ်တိုင် ဆားမြည်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ သစ္စာတရား စစ်ပွဲကို စတင်လိုက်ပါပြီ။- ပြင်ဆင်လိုသူတွေ ပြင်ဆင်ဘို့ အချိန်ရအောင် ကျုပ်တို့ဘက် က စည်းထားပါမယ်။ လူသား ဆန်ဆန် ကမ္ဘာ့ဥပဒေနဲ့ အညီ လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။
ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့သမျှ၊ ညီမျှစွာ ပြန်လည်ခံစားစေရပါမယ်။ လူ့မျိုးဆက် နှစ်ဆက်လောက်- မွတ်ဆလင်ရွာတွေ၊ နယ်တွေကို အကျဉ်းစခန်း သဖွယ် ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျမ္မာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး အဘက်ဘက်က ပိတ်ဆို့ပြီး သေးသိမ်ပိန်လှီသွားအောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ နာဇီစခန်းထဲ က ဘ၀မျိုး ဖြစ်အောင် စီရင်ခဲ့တယ်။ နယ်လိုက် ရွာလိုက် ပိတ်ဆို့ ကွပ်မျက် လို့ မရနိုင်တဲ့ နေရာဒေသတွေက မွတ်ဆလင်တွေကို ခရီးသွား၊ ခရီးထွက်လို့ မရအောင်- နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြား ထုတ်မပေးခြင်း နည်းပညာများ၊ ခရီးလမ်းမှာ စစ်ဆေး ဖမ်းဆီးမယ့် ပေါ်လစီများနဲ့ ခေါင်မိုးမဲ့ တစ်သီး ပုဂ္ဂလထောင်သားဘ၀မျိုး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ခဲ့တယ်။
ဒီအတွက် အခု ခင်ဗျားတို့ အလှည့်ကို ရောက်လာပါပြီ။ လောလောဆယ်မှာ- ခင်ဗျားတို့ ရာဇ၀တ်ကောင်များ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေကို ခြေချကြည့်လိုက်ပါ။ အနည်းဆုံး အမှုတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကို မဖြေရှင်းဘဲ အိမ်ပြန်လို့ မရဘူးဆိုတာ သိသွားရပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရာဇ၀တ်ကောင်များ အတွက် ပထမ အဆင့် အနေနဲ့ နိုင်ငံကြီး တိုင်းမှာ တရားခံဖြစ်အောင် ကျုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ထားပါပြီ။- ဒုတိယ အဆင့် နောက်ထပ် သုံးလ ဆိုရင် ထိုင်းနိုင် ငံ အပါအ၀င်- ကမ္ဘာ့ Interpol ရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ ခြေချလို့ မရအောင် ဖြစ်သွားစေရပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ စိတ် ကူးယဉ်ပြီး ကမ္ဘာနဲ့ချီ အလုပ်လုပ်မယ်၊ အလည်အပတ် သွားမယ်၊ ပညာသင်မယ်-၊ စတာတွေအားလုံး မိမိစိတ် ကူးများကို မိမိ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး မိမိရွာထဲမှာ အကျဉ်းသားဘ၀မျိုးနဲ့သာ နေထိုင်လိုက်ပါ။ ဒါနဲ့မရသေးဘူး။
တတိယ အဆင့်-၊ ကမ္ဘာ့ဝရမ်းပြေးဘ၀နဲ့ ကြွက်တွင်းထဲ ၀င်ပုန်းနေဘို့သာ ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။ မကြာတော့ သော ကာလမှာ ကမ္ဘာ့ ဥပဒေက မြန်မာနိုင်ငံထဲထိ စိမ့်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။- အဲ့ဒီအခါ လူဆိုး လူမိုက် တစ်သိုက် အချင်းချင်း ဘယ်လောက်များ သစ္စာရှိသလဲ- ကိုယ်တွေ့သိရပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ဖျက် ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်လို့လည်း လွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ မသေမှီ ကမ္ဘာ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထောင်သားဘ၀ကို တစ်ယောက်ချင်း ရောက် သွားရပါမယ်။ ပီနိုချေး၊ မီလိုစီဗစ်၊ ကာရာဇစ် တို့လို ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကျော်မှာတော့ မဟုတ်ပါ။ (သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကသာ သိတဲ့) လူမသိ ရှင်မကြားနဲ့ ကမ္ဘာ့အချုပ် ထဲမှာ တရားရုံးတက်ဘို့ စောင့်နေရတဲ့ ရာဇ၀တ်ကောင်များ ထုနဲ့ဒေးထဲက တစ်ယောက်သော သူ ဘ၀မျိုး ဖြစ်အောင် ခင်ဗျားတို့ကို စီစဉ်ပေးပါမယ်။
စတုတ္ထအဆင့်၊ ပဉ္စမအဆင့်—၊ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်။ ကျုပ်တို့ဘက်က တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်သွားနိုင် ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်မူကို ပြန်မပြင်ရင်-၊ အဲ့ဒီ တစ်ဆင့်ချင်းကို ခင်ဗျားတို့ ပြန်ခံရစေ မယ်။ ကျုပ်ပြောခဲ့သမျှ သတိပေးချက်တွေချည်းပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားတတ်ရင်၊ တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင်- ပြန်ပြင် သင့်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
ခင်ဗျားတို့က ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ၊ လူဆိုးလူမိုက်တွေ အစား အပြစ်မဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကိုသာ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်၊ နှိပ်စက်ခဲ့တယ်၊ လက်နက်အားကိုးထား မိုက်ကြေးခွဲခဲ့တယ်။ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေကို ငတ်ပြတ်သေကြေ ကုန်အောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်။ ကြောက်ရွံတုန်လှုပ်သွားအောင် စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီတင် မက ခင်ဗျားတို့ ဗဟုသုတလောက်နဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို အကြမ်းဖက်လို့ စွပ်စွဲနိုင် အောင် လက်နက်တော်လှန်ရေး ဘ၀ကို အတင်းတွန်းခဲ့တယ်။- အဲ့ဒါတွေက ကလေးကွက်တွေပါ။
ရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို တစ်ကယ်ဖမ်းဆီး အရေးယူဘို့၊ အပြစ်မယ့် အဖမ်းခံရသူများကို လွှတ်ပေးဘို့၊ ဒုက္ခ သည်တွေကို ချက်ချင်းကြည့်ရှုဘို့- ရာဇ၀တ်မှုတွေမှာ ဗဟိုအစိုးရက လျှို့ဝှက်ပေါ်လစီများနဲ့ ထောက်ပံ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ဘို့ ကျုပ်တို့ အချိန် ၂ ပတ်ပေးခဲ့တယ်။ အခု နောက်ထပ် ၁ ပတ် (၇ ရက်)ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒီ အချိန်အတွင်းမှာ မပြုပြင်ရင်၊ သမ္မတ ဆိုသူ ကိုယ်တိုင် တရားခံထဲမှာ ပါသွားစေရပါမယ်။ လူဆိုးလူမိုက်များကို ပညာပေးဘို့ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို ကတိပေးပါတယ်။ ကျုပ်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကစ-၊ မသေသင့်ဘဲ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးစီ သေရတိုင်း ခင်ဗျားတို့အတွက် ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခုစီ ထပ်တိုးသွားပါ မယ်။- ရခိုင်နယ်က ရိုဟင်ဂျာ၊ ကမန်၊ ရခိုင် ဒုက္ခသည်တွေ၊ ကချင်နယ်က ကချင်လူမျိုးနွယ် အားလုံးရဲ့ ဒုက္ခ သည်တွေအတွက် ကူညီမဲ့ အကူအညီများကို အာသာငမ်းငမ်းတက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ပဲ ကူညီပါမယ်၊ ကျွန်တော် တို့ လက်ကို အပ်ပါလို့- အရှက်မရှိ ဆက်တောင်းမနေပါနဲ့၊ သမ္မတကစ သူတောင်း စားစိတ်ပေါက်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ လက်ထဲကို ကျုပ်တို့ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မထည့်ဘူး ဆိုတာတော့ သိဘို့ သင့်ပါပြီ။
ကျူပ်တို့ဘက်က ကမ္ဘာ့ ဥပဒေနဲ့ အညီ၊ UN ကို အကူအညီတောင်းပြီး ကြားဝင် ကူညီဘို့ မေတ္တာရပ်ခံ ထား တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်- UN ကိုလည်း အကြောင်းမျိုးစုံပြပြီး မောင်းထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အတင်းဝင်ကူညီမယ့် အခြေအနေကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။-
This entry was posted on December 10, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု ရခိုင်ပဋိပက္ခ သတင်းကား ထုတ်လွှင့်
“ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု” မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် | The Hidden Genocide (Documentary) →